घामबाट छालालाई जोगाउन कस्ता सनब्लक क्रिम छान्ने? :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
घामबाट छालालाई जोगाउन कस्ता सनब्लक क्रिम छान्ने?
लामो समयसम्म घाममा बस्दा वा हिँड्दा विकिरणले छालामा प्रत्यक्ष असर पुर्याउँछ।
गर्मी मौसमको चर्को घामबाट छालालाई जोगाइराख्न जरुरी हुने चिकित्सकहरु बताउँछन्। घामबाट बच्न घर भित्र बसिरहन सम्भव हुँदैन। तर घाममा निस्किदाँ छालालाई डढ्नबाट जोगाउनका लागि थुप्रै उपायहरु अपनाउन भने सकिन्छ।
घामका बिकिरणले गर्ने हानीबाट छालालाई जोगाउन भन्दै बजारमा विभिन्न सनब्लक क्रिमहरु पाइन्छन्। विभिन्न कम्पनीका एसपिएफ क्षमता भएका यस्ता क्रिमले छालालाई डढ्नबाट धेरै हदसम्म जोगाउने विज्ञहरु बताउँछन्।
अल्का अस्पतालका छाला रोग विशेषज्ञ डा. राजन बाबु तझ्याका अनुसार घामको विकिरणले छाला डढाउने, चाउरीपना बढाउने तथा क्यान्सर हुनेसम्मको जोखिम बढाउने गर्छ।
त्यसैले सम्भावित जोखिम न्युनिकरण गर्न गर्मी मौसममा घर बाहिर निस्किंदा ‘सनब्लक क्रिम’को प्रयोग आवश्यक रहेको ताझ्या बताउँछन्।
आफ्नो छाला ‘ड्राई’, ‘नर्मल’ वा ‘ओइली’ कुन प्रकृतिको हो त्यसै अनुरुपको सनब्लक क्रिम लगाएर छालालाई विकिरण तथा छाला डढ्नबाट धेरै हदसम्म बचाउन सकिने उनी बताउँछन्।
त्यस्तै ‘मोइस्चराइजिङ’ क्रिमको प्रयोगले चाउरीपना तथा छालाजन्य केही रोगले गर्ने असरबाट समेत सुरक्षा दिने उनले बताए। तर यसको अर्थ जस्तो पायो त्यस्तै क्रिम प्रयोग गर्नु भन्ने नहुने उनको भनाई छ।
डा ताझ्या भन्छन्, ‘ओजन तह पातलिँदै गएको अवस्थामा पछिल्लो समय छालालाई जोगाउन सनब्लक क्रिमको प्रयोग अनिवार्य प्रायः बन्दै गएको छ, तर त्यसको नाममा गुणस्तरमा भने सम्झौता गर्नु हुन्न।’
छालालाई उपयुक्त सनब्लक क्रिम मिल्दो नभएमा त्यसले समस्या पर्ने उनको भनाइ छ। त्यसैले आफ्नो छाला सुख्खा वा चिल्लो कस्तो हो त्यसकै आधारमा मोइस्चराइजिङ क्रिम, कोकोनट, ओलिभ ओइल अथवा ग्लिस्रिनयुक्त क्रिमको छनोट गर्नुपर्ने उनले बताए।
त्यस्तै क्रिम खरिद गर्दा हात, पाखुरा तथा घाम पर्ने अन्य अंगमा थोरै मात्रामा लगाएर जाँच्न सकिन्छ। यदि चिलाउने, एलर्जी आउने जस्ता कुनै असर नदेखिएमात्र प्रयोग गर्नुपर्नेे उनले सुझाव दिए।
क्रिमबाहेक छालाको सफाईको लागि पर्याप्त फलफूल खाने, पानी पिउने गर्नुपर्छ।
यसबाहेक छालालाई घामबाट जोगाउन छाताको प्रयोग तथा शरीरको अन्य भाग घामबाट छेक्ने गरी लुगा लगाउनु उत्तम हुने उनले बताए।
कस्ता सनब्लक क्रिम पाइन्छन् त बजारमा?
बजारमा विभिन्न कम्पनीका सनब्लक क्रिमहरु पाइन्छन्। कस्मेटिक व्यवसायी रोशन उप्रेतीका अनुसार नेपालमा प्रयोग हुने स्नब्लक क्रिम प्राय भारतबाट आयात हुन्छन्।
उप्रेतीको भनाईमा पछिल्लो समय यस्ता क्रिमको बिक्री बढ्दै गएको छ। हाल निभिया, अस्टबेरी, भिएलसिसी, लोटस, ओसिया तथा न्युलुक्स ब्राण्डका सनब्लक क्रिमको बजार अन्यको तुलनामा बढी छ।
अस्टबेरी ब्राण्डको एसपिएफ मात्रा १५ देखि ४५ सम्म रहेको छ। एक सय ग्रामसम्मको तौलमा पाइने यो क्रिम महिला तथा पुरुष दुवैको छालालाई मिल्ने खालको पाइन्छ।
छालाको प्रकृति अनुसार मिल्दो क्रिमको मूल्य २ सय देखि ४ सय रुपैयाँसम्म पर्ने उनले बताए। क्रिममा हुने एसपिएफको मात्रा र परिमाणका कारण मूल्यमा फरक पर्ने गरेको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै बजारमा भिएलसिसी र लोटस ब्राण्डमा एसपिएफको मात्रा २० देखि ७० सम्म रहेका क्रिम पाइन्छ। प्रति डब्वा ३० देखि १०० ग्रामसम्म आउने यस्ता क्रिमको मूल्य १ सय ८० देखि ८ सय रुपैयाँसम्म पर्ने गर्छ।
ओसिया ब्राण्डमा महिला तथा पुरुषका लागि एसपिएफको मात्रा १५ देखि ६० सम्म रहेको क्रिमको मूल्य प्रतिडव्वा १ सय ८० देखि ५ सय रुपैयाँसम्म पर्छ।
ओइली छाला भएकाहरुका लागि न्युलुक ब्राण्डमा एसपिएफको मात्रा ३० देखि ५० सम्म भएका क्रिम पाइन्छन्। यिनको मूल्य प्रतिडव्वा ३ सय देखि ४ सय ५० रुपैयाँसम्म पर्छ।
उप्रेतिका अनुसार कुनै पनि प्रकारको क्रिम किन्नुभन्दा अघि त्यसमा दिइएको विवरण राम्रोसँग पढ्ने तथा आफ्नो आवश्यकता अनुसारको एसपिएफ भएको छनोट गर्नुपर्छ।
उनले स्नब्लक क्रिम किन्दा ‘टाइटेनियम डाएक्साइड’, ‘जिंक अक्साइड’, ‘एभोवेन्जन’ जस्ता तत्व भएका रोज्नुपर्ने सुझाव दिए।
के हो सन्ब्लक क्रिममा लेखिएको ‘एसपिएफ’ ?
एसपिएफको पुरा रुप ‘सन प्रोटेक्सन फ्याक्टर’ हो।
छालालाई घामबाट कति मात्रामा जोगाउन सक्ने तत्व छ भन्ने कुरालाई यसले अंकमार्फत जनाउँछ। त्यसैले सनब्लक क्रिम किन्दा त्यसमा लेखिएको ‘एसपिएफ’ र सँगै लेखिएको अंकको पनि ख्याल गनुपर्छ।
प्रायजसो क्रिममा एसपिएफ १५, २५, ५० जस्ता अंकसम्म लेखिएको हुन्छ। यसले क्रिम प्रयोग नगरेको अवस्थामा भन्दा प्रयोग गर्दा हाम्रो छाला घामको विकिरणबाट त्यति नै गुणा ज्यादा सुरक्षा दिन्छ भन्नु हो।
उदाहरणका लागि यदि तपाईंको छालालाई डढ्न १० मिनेट समय लाग्छ भने २५ एसपिएफ लेखिएको क्रिम प्रयोग गर्दा त्यसले २५ गुणा बढी अर्थात २५० मिनेटसम्म छालालाई सुरक्षित राख्छ।
तर यसको अर्थ धेरै एसपिएफ भएको क्रिम सबैभन्दा राम्रो भन्ने होइन। कुनै पनि क्रिमले छालालाई शतप्रतिशत सुरक्षित राख्छन् भन्ने होइन तर ति क्रिमको प्रयोगले सामान्य अवस्थामा भन्दा धेरै हदसम्म सुरक्षा मात्र प्रदान गर्छ भन्ने हो।
त्यसैले न्युनतम १५ देखि ५० सम्मको अंक सम्मको एसपिएफ सबैका लागि उपयुक्त हुन्छन्। प्रयोगकर्ताले क्रिम रोज्दा बढी एसपिएफ भएको भन्दा पनि त्यसलाई आफ्नो छाला अनुसारको छनोट र त्यसको पहिलो प्रयोग भन्दा केहि समयको अन्तरालमा पुनः प्रयोग गर्दा छालालाई सुरक्षाको हिसाबले उपयुक्त हुने विज्ञहरुको भनाई छ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत १२, २०७४, ०४:२०:४३